Tonga ny fanavaozana Google vaovao an'ny iOS | Vaovao IPhone
Google dia namoaka fanavaozana ho an'ny fampiharana an-tsarintany malaza indrindra eny an-tsena, Google Maps. Ankehitriny ny fampiharana ankoatry ny zava-bita fahita mahazatra, ankehitriny isika dia afaka mahazo valisoa valisoa omen'i Google antsika ho takalon'ny fizarana vaovao sy ny fandraisana anjara miaraka amin'ireo angona mitovy amin'izany. Google dia miasa tsara amin'ny Google Maps, zavatra fantatr'i Apple izy ioNoho io antony io dia manavao tsy tapaka sy manatsara ny fampiharana ny sarintany manokana araka izay tratra izy, ary izany dia satria Google Maps dia azo ihodivirana ho iray amin'ireo rindranasa alaina indrindra ao amin'ny App Store ho an'ny iOS, na firy na firy izy.
Ankehitriny ny fitadiavana toerana manokana dia mora kokoa sy haingana araka izay azo atao, ary koa ny toerana mahaliana indrindra ao an-tanàna sy ny vaovao manodidina ny toerana misy anay. Afaka mivezivezy amin'ny firenena sy faritany 220 samihafa isika, ary koa ny fitetezana GPS tarihin-feo mahazatra izay hanamorana ny fitondrana fiara, na dia azontsika atao koa ny mampiasa an-tongotra na amin'ny fitateram-bahoaka, tafiditra tanteraka. Tanàn-dehibe sy tanàna 15.000 mahery no hita ao amin'ny Google Maps, ary koa ny vaovao farany sy mivantana momba ny olan'ny fifamoivoizana.
Ny fampiharana toy ny mahazatra dia misy ao amin'ny App Store maimaimpoana, mila mampidina azy fotsiny ianao, raha ny marina dia azonao atao ny mampihatra azy amin'ny kaonty Google anao raha te hitahiry ny mombamomba anao sy ireo tranonkala tianao hitety ianao. Google Maps dia niaraka tamin'i Telegram ny fampiharana voalohany nohavaozina tamin'ity taona 2016 ity, mandray tsara haingana miaraka amin'ny fanatsarana, araka izay tiantsika indrindra.
Inona no Vaovao ao amin'ny Version 4.14.0
• Midira amin'ny vondrom-piarahamonina Guides eo an-toerana ary hahazo valisoa amin'ny fiaraha-miasa amin'ny pejy "Ny fandraisanao anjara"
• Mizarà mora foana ny sarintaninao manokana, manomboka amin'ny graffiti mahaliana indrindra any Berlin ka hatrany amin'ny tsena tsara indrindra any Bangkok
• Fanitsiana lesoka
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Tonga ny fanavaozana ny Google Maps ho an'ny iOS
Ny hany fampiharana sy pejy web google maps izay milay dia ilay tonga tao amin'ny iOS talohan'ny 6. Maharikoriko tanteraka ilay rindranasa sy pejin-tranonkala vaovao. Nisy fanangonan-tsonia nosoniavina tao amin'ny Change.org saingy tsy nisy izany. Fahavetavetana ny app sy ny tranonkala miaraka amin'ilay bara fikarohana tsy misy ilana azy izay mitana ampahany tsara amin'ny efijery ary tsy misy sonia hanafoanana azy.
Ny zava-drehetra tsara, izay miasa rehetra dia ampidirina ao amin'ny mania manavao ny zava-drehetra! Mandra-pahatongan'ny satroka !!
Steve Jobs, mieritreritra ilay biopic Steve Jobs [tsy misy manimba] izahay
Microsoft mandefa ny rindrambaiko selfie azy manokana